Amazon ikwughachi Dot Review - News Ọchịchị
Amazon ikwughachi Dot Review
Ahụ kwuo ihe Dot bụ ihe niile na-dị oké banyere ibu ikwughachi ọkà okwu condensed n'ime a obere Puck na-efu otu ụzọ n'ụzọ atọ nke price.
Obere gadget na-eweta olu akara na-fọrọ nke nta ka ọ bụla smart ngwaọrụ ke ufọk, na-egwu egwu music, -aza ajụjụ na-agwa gị na ihu igwe
Isiokwu a na-akpọ “Amazon ikwughachi Dot review: dị ka ahụ kwuo ihe maka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke price” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Monday 28th November 2016 07.00 UTC
The Amazon ikwughachi Dot bụ nnoo niile ibe n'ibe nke ihe Amazon ikwughachi na-eme ka ọ na-akpali, ma na-enweghị ọkà okwu n'okpuru ya - n'ihi ya, ọ na-efu nanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke price.
The Dot bụ otu n'ime atọ Alexa-nyeere ngwaahịa si Amazon na-ewepụta na ụlọ ọrụ olu nnyemaaka n'ihu na center. naanị abụọ, ahụ kwuo ihe Dot na ahụ kwuo ihe dị ke UK: nke atọ, a na-ebupụta Bluetooth ọkà okwu na-akpọ Amazon Mgbata, bụ nanị dị na US.
The microUSB USB na 3.5mm audio cable plọg n'ime azụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Dot bụ obere nwa ma ọ bụ na-acha ọcha Puck na a mgbanaka nke ọkụ na elu, anọ buttons na a asaa okwu n'usoro - otu usoro na-eme ka ahụ kwuo ihe ọkà okwu otú ahụ ihe ọma na-anụ gị si mara mma nke ukwuu n'ebe ọ bụla.
Ọ na-ege ntị maka a "Ruth okwu", nke ndabara bụ aha nke olu nnyemaaka ẹdude n'ime ndị Dot: "Alexa". Ekwu Ruth okwu na olu nnyemaaka wee dị ndụ ịza ajụjụ, ewere iwu na ịrụ omume.
The Dot nwere obere wuru na-ekwu okwu, nke bụ mma nye ihe nile olu Ibọrọ Alexa spits si, Mkpu na ndị ọzọ na alerts, ma na-adịghị n'ezie e mere na-egwu music, amị tinny ụda.
Kama azụ nke Dot nwere a audio-esi n'ọdụ ụgbọ mmiri, nke ezubere plọg n'ime gị ẹdude ọkà okwu. Alternatively, ọ nwere ike na-anọkarị ka a wireless ọkà okwu via Bluetooth.
Gịnị ka ọ dị ka?
The acha ọcha Dot ka nwere nwa n'elu, ma ya mfe imewe adịghị na ya si n'ebe on a bed-n'akụkụ kabinet ma ọ bụ ọkà okwu. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Dot bụ ihe ijuanya na uche ọdụ na countertop ma ọ nọgidere na-mgbidi. E nwere ihe a n'usoro n'usoro ìhè mgbanaka gburugburu n'elu na-egosi mgbe ọ na-arụsi ọrụ ike na-ege ntị gị na odomo red mgbe ị see ogbi button, electrically disconnecting ndị mics, otú ị mara mgbe ọ bụ na-adịghị ege ntị na.
The acha ọcha Dot nwere a na agba ntụ n'elu, nke pụtara na ọ guzo apụ karịrị ya ike na a na-acha ọcha bed-n'akụkụ table, dị ka ọmụmaatụ. I nwere ike inwe obere Jaketị maka isi ke akpụkpọ anụ ma ọ bụ ákwà ma ọ bụrụ na onwunwu plastic adịghị nnọọ bee ya na gị ihe ndozi.
Pịa bọtịnụ n'elu ịchịkwa olu nke wuru-na ọkà okwu ma ọ bụ mmepụta gị ejikọrọ ọkà okwu. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ahụ kwuo ihe Dot nwere ike ime ihe ọ bụla Alexa nwere ike ime. The set elu bụ otu dị ka ahụ kwuo: ikwunye ya na, emeghe Alexa ngwa gị ama na soro ntuziaka ka jikọọ ya na gị na netwọk Wi-Fi.
Ozugbo elu na-agba ọsọ, Alexa nwere ike igosi a dịgasị iche iche nke gị ahụkarị nnyemaaka atụmatụ. Ọ na-Aga melite Ngụọge, -agwa gị oge, set Mkpu, -agwa gị ihe gị ụbọchị anya dị ka gị ejikọrọ kalenda, -agwa gị banyere gị na-aga aga ma ọ bụ ihu igwe na-aza ajụjụ banyere ụdị nile nke ihe.
Alexa nwere ohere nnọọ ọtụtụ nke ọmụma, ma Mmụba ndị data Google nwere n'oge ya a fingertips, nke pụtara Alexa ga-alụ ajụjụ ụfọdụ mgbe a Google olu search wee ghara.
The nnukwu ihe dị iche bụ na Alexa zara, sị na a ihe ijuanya mmadụ ụzọ, na ike fọrọ nke nta mgbe aghọta ihe ị na kwuru ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-apụghị ịza ajụjụ, nke pụtara na ọ ga-esi ka mma karịrị oge dị ka ihe data na-esibuak n'ime backend Amamịghe echiche.
Alexa nwere na-akpọ nkà na ike-atụkwasịkwara ya. Ndị a ngwa-dị ka ihe na-enye ya ọhụrụ ikike. Nza nke ụlọ ọrụ na ọrụ nwere nkà. The Guardian nkà ga-agụ unu ozi ọma, n'akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ reviews, dị ka ọmụmaatụ. The National Okporo ígwè nkà ga-agwa gị ihe gị okporo ígwè na-aga aga anya dị ka. The Allrecipies nkà ga-enwe ike na-agụ gị otu n'ime 60,000 dị iche iche ntụziaka.
Ma eleghị anya, ihe kasị mma set nke nkà dị maka ahụ kwuo ihe Dot bụ smart n'ụlọ njikwa. Ọ bụ n'ebe ahụ Dot-enwu: o nwere a dịgasị iche iche nke nkwado maka smart ejikọrọ ngwaọrụ, si ekwu okwu na ime njikwa, ka ọkụ, kọfị igwe ma ọ bụ ihe ọ bụla jikọrọ ya na a Samsung SmartThings ehiwe.
Alexa, gbanye ọkụ na ndụ ụlọ
The red ìhè na ogbi button na ìhè mgbanaka show mgbe Alexa ike ịnụ gị ọzọ n'ihi na mgbe ị chọrọ a obere nzuzo. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Nke igbe na-arụ ọrụ na Philips hue, mgbe nkà adị n'ihi akwu, ekwo Ekwo, Honeywell, Tado, LightwaveRF na LIFX, na Sonos atụ anya na anya.
Mgbe o risịrị elu i nwere ike nye iwu dị nnọọ banyere ihe ọ bụla. Ị ga-echeta aha nke ihe ị na-agbalị iwu, ma n'ime Alexa ngwa ị nwere otu ihe ka ha na na oyi na otu iwu.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ na smart n'ụlọ usoro, otu item pụrụ enịm n'ime multiple iche iche nke pụtara a ime ìhè nwere ike ịbụ na "ime" otu nakwa dị ka na "elu" ìgwè na ikekwe a "ụlọ" otu, nke mere na i nwere ike gbanwee nnọọ ime ọkụ na, dum nke elu ma ọ bụ gbanyụọ ofụri ufọk mgbe ị na-eje ije si n'ọnụ ụzọ.
Ị nwekwara ike ịtọ ihie, agba, idaha ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ gị ọkụ support, ma ọkụ ahụ bụ nanị mmalite. Fọrọ nke nta ọ bụla smart n'ụlọ ngwa oru nwere ike na-achịkwa via olu na nri njikọ.
Ị nwere ike ịtọ okpomọkụ via a akwu, ka kọfị na-aga via a smartplug, ịgbanwee na TV ma ọ bụ gbanyụọ, ka ọwa ma ọ bụ ime mara mma nke ukwuu ihe ọ bụla na ngwaọrụ jikọọ a SmartThings ehiwe.
Ahụ kwuo ihe Dot adịghị ga-a ga-eji na-akpa iche ma. Ọ bụrụ na ị na earshot nke abụọ ntụpọ ma ọ bụ ọzọ ikwughachi ngwaọrụ, naanị kacha nso onye ga-aza gị iwu. Amazon ọbụna akanyam ha na Ukwu: ịzụta ise-a isii free, ma ọ bụ zụta 10 ma na-abua free. O doro anya na ọ chọrọ ka ị na-etinye ha n'ime ụlọ gị niile.
Ebe a m ji masking gafee azụ nke Dot na a nnyapade fixer ka nwa oge ugwu ya na mgbidi. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ọ na-arụ ọrụ ijuanya ọma mgbe ndokwasa na mgbidi, ma ị ga-akwalirịrị kwụsịrị roba na mpe mpe akwa ma ọ bụ mee ka ị onwe mgbodo
Alexa mgbasa ozi na TV enịm ha
Mgbe ụfọdụ redio ahụ ga-emekwa ha, ka ha
Mgbe ị nwetara ya ekirikarị ruo ọkà okwu ahụ Dot ga naanị mmepụta ya audio site ndị ọkà okwu, ya mere, ha mkpa ka a hapụrụ on niile aka ya na-agwa gị okwu ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-agaghị na-egwu music
IFTTT na Logitech Harmony support na-abịa ngwa ngwa, nke ga-uku ịgbatị Alexa si smart n'ụlọ support
I nwere echiche nke ọma banyere ihe ị na-aga na-akpọ onye ọ bụla nke ejikọrọ ngwaọrụ n'ihi na ị ga-ekwu aha ha ka Alexa maka ha ka ha-arụ ọrụ n'otu n'otu
The Amazon ikwughachi Dot na-efu £ 50 na ma nwa ma ọ bụ na-acha ọcha. The ibu ikwughachi-efu £ 150.
Uru: excellent mic array means it can almost always hear you, small but loud enough to be heard clearly, great device support, clear mute, turns your old Hi-Fi into a smart, voice-controlled speaker, voice control IoT devices
Ọghọm: really needs to be connected to a speaker for music, can’t always answer the question, always-listening object in your house, doesn’t support multiple user calendars or personal information, only one Spotify or Amazon music account can be linked at any one time
Logitech Harmony J.Randall review: mfe iji na n'ime ime obodo na-ewe ndebe nke ebe obibi gị
Amazon.com, Nkeji edemede, Ngwa, Internet, Internet ihe, Nyocha, Samuel Gibbs, Technology, UK Technology, Voice ude
← Nke Windows laptọọpụ nwere ike Dochie a MacBook Pro? OnePlus 3T Review →